Behoririka ; Roa lahy voalaza fa nanafika Sinoa, maty voatifitra
Photo Behoririka (Antananarivo) source www.panoramio.com/photo/4217464
Roa lahy no maty nanafika Sinoa teny Behoririka, tao amin’ny tranon’ny Daktigrafz, omaly tokony ho tamin’ny 7 ora hariva mahery.
Polisy avy ao amin’ny Boriborintany fahatelo, nahita ny fihetsika hafahafa nataon’ny lehilahy vitsivitsy no nanakana ny fiaran’ny FIS sendra nandalo teny, izay avy nanatitra ny filoha Andry Rajoelina. Teo an-dalatsara fidirana no voatifitra ny iray tamin’ireo voalaza fa mpanafika, voa teo amin’ny ambavafony. Ny iray kosa, teo ambaravaran’ny tranon’ilay Sinoa notafihany no lavo. Nisolifatra teo amin’ny karandohany ny bala ka niparitaka ny lohany.
« Avy dia nandray andraikitra ny olonay, niakatra nanenjika tany ambony tany. Ny Polisy niandry taty ambany. Nifanapaka avy any ambony sy avy aty ambany ny tifitra ka izay no nahalavo ireo roa lahy ireo. Nisy ny afaka niporitsaka. Toa nisy voatanan’ny Polisy. Izahay FIS, rehefa toa izao manome tanana ihany », hoy ny Kly Lylyson, lehiben’ny FIS.
« Mpitandro filaminana avy amin’ny ankolafy samihafa izay no tonga nifanome tanana teto», hoy kosa ny manamboninahitra iray ao amin’ny GIR. Fiaran’ny Polisy telo, fiaran’ny zandarimaria talo sy fiaran’ny FIS telo no nitondra ireo mpitandro filaminana tena Behoririka. Nohazavain’irony jiro fitondra mandehandeha amin’ny maizimaizina irony ny toerana nanenjehana ireo voalaza fa jiolahy teny an-toerana. Talohan’izay dia ny jiron’ny fiaran’ny FIS iray no nanazavana ny lalantsara fidirana.
Nanao savahao ireo efitra tao amin’ilay trano misy rihana efatra, tao amin’ny tranoben’ny Daktigrafz izy ireo. Ilay Sinoa lasibatry ny fanafihana dia fantatra fa naratra mafy. Tsy marina kosa ny tsaho niely teny an-toerana fa nisy takalon’aina notazonin’ireo andiana lehilahy nanafika tamin’ity raharaha ity.